Ra’iisul wasaare Cumar Cabdirashiid oo lagu soo dhaweeyay Dhuusamareeb – Radio Muqdisho
Ra’iisul wasaaraha iyo wafdi uu hogaaminayo oo gaaray magaalada Dhuusamareeb ee xarunta Gobolka Galgaduud ayaa waxaa halkaasi ku soo dhaweeyay mas’uuliyiin uu ka midyahay Wasiiru-dowlaha Madaxtooyada Qaranka Soomaaliya Mudane Mahad Maxamed Salaad iyo mas’uuliyiin ka tirsan Maamulka Gobolka Galgadud.
Ra’iisul wasaaraha waxaa socdaalkiisa ku wehliya Wasiirka Arrimaha gudaha iyo Federaalka Mudane Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen Odowaa, xubno kale oo ka tirsan labada gole ee dowladda, saraakiil ciidan iyo mas’uuliyiin kale, waxaana ay gaareen hoolka shirarka ee magaalada Dhuusamareeb, halkaasi oo ay ka socoto shirka dib-u-heshiisiinta beelaha wada degga gobollada Mudug iyo Galgaduud.
Ra’iisul wasaaraha Soomaaliya Mudane Cumar Cabdirashiid Cali Sharma’arke iyo wafdiga la socda waxaa lagu wadaa inay kulamo la qaataan mas’uuliyiinta iyo odoyaasha dhaqanka gobolka Galgaduud, si loo da dajiyo shirka dib-u-heshiisiinta iyo in laga wada shaqeeyo maamul u sameynta Gobollada Mudug iyo Galgaduud.
Guddoomiyaha Gobolka Galgaduud Xuseen Cali Wehliye Cirfo oo ka hadlay hoolka lagu soo dhaweynayay Ra’iisul wasaaraha ayaa sheegay inay aad ugu faraxsanyihiin soo dhaweynta Wafdiga Ra’iisul wasaaraha.
10-ka Janaayo ee sanadkan ayay ahayd markii uu Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud uu gaaray magaalada Dhuusamareeb, halkaasi oo uu si rasmi ah uga furay shirka dib-u-heshiisiinta bulshada wada degta Gobollada Galgaduud iyo Mudug.
Wasaaradda Caafimaadka oo lagu wareejiyay deeq Dawo ah